India mahaliana " Journey-Assist - Fety ao India. fitetezam-paritra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » India
Sarintany ifanakalozana mahasarika sy torapasika any India
Any India, ny fomba nentim-paharazana taloha sy ny zava-bita maoderina dia mifangaro amin'ny fomba mahagaga. Firenena iray lehibe io ary tena be mponina, izay misy mponina maro. Ankoatra izany, ny vondrom-piarahamonim-pirenena tsirairay dia samy manana ny fiteniny, ny kolontsainy, ny lovantsofina, izay no mampitaha an'i India amin'ny kontinanta manontolo. Ny kolontsaina Indiana dia nivoatra tamin'ny vanim-potoana maro. Betsaka ny tsangambato ara-tantara sy ara-kolontsaina misy dikany eran-tany eto amin'ity firenena ity.
Modern India dia manavaka amin'ny fahasamihafana lehibe ara-kolontsaina, ara-pinoana, fiteny ary vondrom-poko lehibe. Samy hafa be ny faritra samihafa eto amin'ny firenena. Saika ny fanjakana tsirairay dia manana ny kolontsainy manokana. Na eo aza izany dia mijanona ho firenena tokana i India noho ny tantara mahazatra.
Fivavahana maromaro no nipoitra tany India - ny bodisma, hindoisme, sikhism ary jainisma. Ny fivavahana bodista dia nanjary antokom-pivavahana eran'izao tontolo izao izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny India sy ny firenena hafa tany Azia sy manerantany. Vokatry ny fanitarana Silamo niditra tao amin'ny firenena sy ny fanjakan'ny vahiny hafa ao aminy, ny kolontsaina Indiana dia nitaona ny kolontsaina Persia, Turko ary Arabo. Ny kolontsaina Indiana ihany koa dia nisy fiantraikany tamin'ny sisa tany Azia sy izao tontolo izao.
Any India, misy vanim-potoana 3 - mafana, mando, mangatsiaka. Manomboka amin'ny volana febroary ny vanim-potoana mafana. Amin'ny volana aprily, lasa tsy zaka ny hafanana. Manomboka amin'ny volana mey ny monsoons. Mandritra izany fotoana izany dia mitranga matetika ny oram-baratra ary miakatra ny hamandoan'ny rivotra.
Ny fiandohan'ny orana masiaka dia ny folo taona voalohany amin'ny volana Jona any atsimon'ny firenena, ary any avaratra sy tapaky ny volana jolay. Tsy mihena ny mari-pana amin'ny rivotra mandritra ny vanim-potoanan'ny mononta. Ny ankamaroan'ny monsoons dia avy any atsimo andrefana, fa ny morontsiraka atsimo atsinanan'i India dia rakotry ny tondra-dronono mando avy any avaratra atsinanana, izay avy ny orana manomboka amin'ny folo taona Oktobra ka hatramin'ny voalohan'ny volana Janoary. Ny ankamaroan'ny monsoons dia mifarana amin'ny volana oktobra, ary amin'ny volana desambra dia manjary masiaka ny rivotra any amin'ireo tanàn-dehibe any avaratr'i India amin'ny alina. Any amin'ny atsimon'ny Indiana izay tsy misy hatsiaka na oviana na oviana dia misy hafanana mahafinaritra antonony amin'ny Desambra.
Tendrombohitra any india
Ny fotoana mety indrindra handehanana any India dia voafaritry ny toerana kasainao haleha. India dia firenena lehibe tokoa. Ny halavany avy any avaratra ka hatrany atsimo dia mihoatra ny 3 km, ary avy any andrefana ka hatrany atsinanana dia manodidina ny 000 km. Ny fanamaivanana koa dia tena isan-karazany. Izany rehetra izany dia nahatonga ny fahasamihafan'ny toetrandro.
Ny tany an-trano
Ohatra, ny volana Jolay sy Aogositra any amin'ny faritra atsimon'i India dia be ny hafanana, ary ambonimbony ny hamandoana rivotra. Ireo volana ireo no tsara indrindra amin'ny dia mankany Lada (faritra izay miorina amin'ny Plateau Tibet). Any amin'ny faritra be tendrombohitra, ny toetr'andro dia faritry ny haavon'ny faritra iray any an-tendrombohitra.
Natiora any india
Tokony ho tonga any amin'ny faritra afovoany sy atsimon'i India ianao amin'ny Jolay-Septambra (amin'izao fotoana izao ny mari-pana dia mazàna + 25 ... + 30) ary amin'ny vanim-potoana hatramin'ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa (ny mari-pana amin'ny rivotra amin'ireo volana ireo dia avy amin'ny +20 ka hatramin'ny 25), fa manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny jona dia misy toetr'andro ratsy (hafanana mahery, rivotra maina, mari-pana hatramin'ny +45).
Weather in India anio (an-tserasera)
Widget ifampizarana miaraka amin'ny toetrandro ankehitriny any India. Azonao atao ny manova ny sosona ho rivotra, currents, hafanana, kotroka sy ny maro hafa.
Vola any India. Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny india
Ny haben'ny vola eto India dia ny rupee indiana. 1 rupee dia zaraina ho 100 paise, na izany aza, noho ny fisondrotam-bidim-piainana, paise dia tsy tena ampiasaina. Amin'ny fizaram-pefy dia misy anaram-piangonana 5, 10, 20, 50, 100, 500 ary 2 000 rupe, ary koa vola madinika 1, 2, 5 ary 10 rupee.
Ny fifanakalozam-bola dia azo atao amin'ny seranam-piaramanidina, banky, birao fifanakalozana arabe, trano fandraisam-bahiny, fivarotana firavaka. Ny fifanakalozana azo antoka indrindra dia any amin'ny banky sy ny hotely. Amin'ny birao fifanakalozana eny an-dalambe dia matetika misy fitaka amin'ny endrika hitsin-dalana, sarany miafina, sns. Ambonin'izany, amin'ny seranam-piaramanidina, ny tahan'ny fifanakalozana dia tena tsy mahasoa raha oharina amin'ny toerana hafa.
Tsy soso-kevitra mafy ny hanova vola amin'ny toerana iantsoan'ny mpamily fiarakaretsaka na ny mpitantana ny hotely na olom-pantatra avy amin'ny mponina eo an-toerana anao. Amin'ity tranga ity dia tena tsy hahasoa ilay taranja. Rehefa dinihina tokoa, ny tompon'ny exchanger toy izany dia tsy maintsy mandoa insentif an'ireo "barkers" toa itony mba hisarihana ny mpanjifa.
Vola tany India
Aorian'ny fanaovana fifanakalozana sy fahazoana tapakila dia tsy maintsy tazonina mandra-pahatapitry ny dia izy io, satria manome ny zony hanao fifanakalozam-bola mihodina rehefa miala any India (na izany aza, tsy mihoatra ny 25% ny sandam-bola) Voarara ny fanondranana vola India avy any India. Avy amin'ny vola miaraka aminao mankany amin'ity firenena ity, misy dikany ny manafatra ny dolara amerikana fotsiny. Ny Euro dia tsy ekena hatraiza hatraiza ary amin'ny taha kely kokoa. Amin'ny toerana maro dia ekena ny fifanakalozana ny pounds British sterling, izay tsy fahita amin'ny CIS. Ny robla rosiana dia ekena amin'ny toerana mitokana, ary na dia izany aza - amin'ny tahan'ny biby mpiremby.
Ny mpanova dia kajy vola. Ratee indiana indiana androany
Ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny
Mampiseho ny fihetsika ao India
Any India, ny famihina sy ny fanorohana am-pahibemaso dia heverina ho fomba ratsy. Ny endrika fiarahabana nentim-paharazana dia ny mamoritra ny felatanana amin'ny fomba manokana. Na izany aza, ny fandraisana tànana, izay fantatsika, dia ekena ihany koa, fa eo amin'ny lehilahy ihany. Saingy tsy tokony hiezaka mafy hifandray tanana ianao raha tsy misy ny faniriana manokana an'ny mpanelanelana.
Mandrara izany fihetsika izany ny Indiana maro. Tsy mendrika ihany koa ny hifandray tanana amin'ny vehivavy. Tsy azo ekena ny mametraka ny tanan'ny interlocutor eo amin'ny soroka na hikasika ny lohan'ny olona iray, afa-tsy ny tenanao ihany.
Tsy azo atao ny manao lava volo malefaka. Ny vehivavy dia tokony mandrakotra ny tongony amin'ny kitrony (ary tsy tokony ho henjana io akanjo io). Tsy azo atodika any amin'olona ny kiraro, manavesatra io fihetsika io, satria manondro olona na zavatra iray. Aza mampiaka-peo amin'ny resaka iray ary asehoy ny fihetseham-po ratsy, raha tsy izany dia tsy hifandray aminao fotsiny izy ireo. Alohan'ny hidiranao any amin'ny tempoly dia alao antoka fa esory ny kiraronao.
Sakafo ao India
Ny nahandro indiana dia iray amin'ireo antitra sy be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao. Miorina amin'ny legioma isan-karazany izy io, izay antsoina eto hoe "sabji" (ny ankamaroan'ny mponina ao India dia mpihinan-kena), ary koa ny vary, trondro, vokatra lafarinina, vokatra vita amin'ny ronono.
Ny mampiavaka ny nahandro Indiana dia ny fampiasana zava-manitra ampitomboina saika amin'ny lovia rehetra (ao anatin'izany ny legioma). Ny fifangaroan'ny zava-manitra "curry" dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, izay azo atao arakaraka ny fomba fahandro isan-karazany ary mamela anao hanome tsiro tsy mahazatra amin'ny lovia rehetra.
Amin'ireo zava-pisotro any India, ny dite no tena malaza. Matetika no afangaro amin'ny ronono eto na menaka manitra vao ampiarahina aminy. Sotroina be dia be ihany koa ny kafe sy ny ranom-boankazo. Tsy dia be mpahalala eto amin'ity firenena ity ny alikaola.
Fiantsenana any India
Manana tombony lehibe ny fiantsenana ao India toy ny vidiny mora.
Any Inde, ny barraining dia zatra amin'ny tsena sy ny fivarotana kely. Amin'ny voalohany, ny sandan'ny mpivarotra amin'ny entana entin'ny mpivarotra dia tokony hizara roa mba hamaritana ny tena vidiny. Na izany aza, raha hividy vokatra amin'ny sandany ankehitriny dia mila milalao fampisehoana kely ianao. Voalohany dia mila manonona ny sandanao ianao, izay tokony ho telo na efatra heny aza ambany noho ny vidin'ny mpivarotra. Avy eo dia tokony hihaona kely amin'ilay mpivarotra ianao, hampitombo tsikelikely ny vidiny ekena aloa. Hihaona aminao koa ny mpivarotra, ka mampihena izany. Rehefa mandeha ny fotoana, dia hiatrika vidiny ianao. Mandritra ny fizotran'ny tolotra dia tokony mitsiky ianao, ho sariaka, azonao atao ny mampihomehy, mampivadi-po mahery vaika, mitaraina momba ny vidiny be loatra. Ny fandavan'ny mpividy ny mpividy amin'ny mpividy dia saika hoheverina ho faniratsirana ny tenany.
Amin'ny magazay sy magazay lehibe, ny vidiny, mazava ho azy, raikitra, mifampiraharaha any dia tsy mandeha. Na izany aza, ny fifampiraharahana dia mety amin'ny toerana hafa izay tsy misy soratra "vidiny raikitra".
Endrika fiantsenana hafa any India:
Ny tsena mora indrindra dia any Delhi.
Ny tsena lehibe indrindra any Delhi dia antsoina hoe Chandi Chowk. Eto ianao dia afaka mahita saika ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny fitafiana, sakafo, antikristy.
Betsaka ny vokatra indianina dia vita tànana. Izy ireo dia hoso-doko fotsiny amin'ny hosodoko voajanahary. Noho izany, somary tia tontolo iainana ireo vokatra eo an-toerana.
Inona ireo vokatra lafo vidy any India:
Hazo vita amin'ny haingon-trano.
Ny vidin'ny entana eto amin'ity firenena ity dia somary ambany raha ampitahaina amin'ireo firenena tandrefana sy ny USSR teo aloha. Rehefa mahay miady ary mahalala ireo baza ilaina, dia afaka mandany kely be ianao. Raha ny momba ny sakafo, ny voankazo izay tsy nampiavaka an'i India mihitsy (anisan'izany, ohatra, ny paoma mahazatra antsika) dia lafo eto raha oharina amin'ny voankazo eo an-toerana. Tokony ho mailo hatrany ianao rehefa mitsidika toeram-pivarotana, na dia ny toeram-pivarotana aza.
Atolotro anao ny famoahana ity lohahevitra ity - Toerana 10 mahaliana hitsidihana an'i India
Mety ho liana amin'ilay lahatsoratra koa ianao - Toerana 10 mahaliana hitsidihana an'i Rajasthan. India
Raha handeha ho any India ianao dia tena mamporisika anao hitsidika ireo tempolin'ny lava-bato - Ellora. Jereo ny lava-bato Ellora taloha any India
Azo antoka fa hahaliana anao ilay lahatsoratra - Tempoly 10 mahavariana indrindra any India
Tempolin'i Mahabodhi. India